झापाको बिर्तामोडमा मङ्गलवार पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संयुक्त रूपमा उक्त अस्पतालको उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई हजुरबुवाको साइनो लगाउँदै त्यसका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले केही प्रश्न राखे । जुन प्रश्नहरू उत्तर उनी मात्र नभएर आम मानिसहरूले पनि खोजिरहेका छन् ।
यस्ता छन् प्रसाईँले प्रधानमन्त्रीसामु राखेका ४ प्रश्न ।
तस्विर : हिमाल खरेल / झापाटूडे
१) यो देशमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धक्क भएर व्यापार व्यवसाय गर्ने दिन कहिले आउँछ प्रधानमन्त्री ज्यू ।
२)८० प्रतिशत हिन्दु सनातन धर्मावलम्बी बसोबास गरेको मुलुकको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन यहाँसामु अबको योजना के छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
३) साउदी कतार मलेसिया जाने जहाजहरूमा न्याउरा अनुहार भएका युवाहरूको साटो नेपाली सागसब्जी, नेपाली जडीबुटी हिमालयनको शुद्ध मिनिरल वाटरहरू लोड भएर निर्यात हुने स्थितिको थालनी कहिले हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
४) युरोप अमेरिका थाइल्यान्ड अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा नेपाली बिद्यार्थीहरुमार्फत बर्सेनि हुने पुँजी पलायन रोकिने, नेपालमा सयौँ मेडिकल कलेजहरू खोलेर विदेशी विद्यार्थीहरु मार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिन कहिले आउँछ प्रधानमन्त्रीज्यू ।
२०७४ साल मङ्सिर २ गते अर्थात् आजभन्दा ३ वर्ष अगाडी यसै प्राङ्गणमा मेची अञ्चल वासीहरूको लागि खोलिएको मेडिकल कलेजको फाइल लिएर तपाइहरू आउनुहोस् । हामी २ महिनाभित्र फाइल पास गरेर पठाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो । त्यो फाइलको अवस्था के हुँदैछ र बिएण्डसी मेडिकल कलेजले अब सम्बोधन कहिले पाउँछ प्रधानमन्त्री ज्यू । मेची अञ्चलवासीले जवाफको अपेक्षा गरेका छन् ।
सम्बोधनको लागि २५ मिनेट भन्दा बढी समय खर्चेका दुर्गा प्रसाईँका ४ प्रश्नमध्ये आम मानिसहरूले पनि सुरुका तीन प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यी चार प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा एउटाको मात्रै उत्तर दिँदै भने,
अघि केही प्रश्नहरू गर्नुभयो केही प्रश्न सोध्छु भन्नुभयो, म त सायद मैले बोक्नै नसक्ने भारी पो बोकाउनु आँट्नुभयो भन्ने लाग्या’थ्यो । देशै बनाउने कुरा रहेछ त्यो त मैले सङ्कल्प गरेकै छु । यो शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा अगाडी बढिसक्यो । केही समयभित्रै शिक्षण अस्पतालको रूपमा आउनेछ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यसको सम्बन्धन दिनेछ ।
तपाइको एउटा प्रश्नको जवाफ भयो । यो एउटा प्रश्नसँगै धेरै वटा प्रश्नको जवाफ भैसकेको छ भन्दै कुरा प्रधानमन्त्रीले कुरा अन्यत्र मोडे ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधबार, फाल्गुन १९, २०७७ १०:००:०१